DHEGEYSO: Xisbiyada waawayn ee Sweden oo qaadanaya siyaasado soo galooti diid ah (Tirada dadka iska dhiibaya oo la xadidayo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Xisbiyada waawayn ee Sweden oo qaadanaya siyaasado soo galooti diid ah...
DHEGEYSO: Xisbiyada waawayn ee Sweden oo qaadanaya siyaasado soo galooti diid ah (Tirada dadka iska dhiibaya oo la xadidayo)
(Stockholm) 02 Luulyo 2020 – Xisbiga Liberalerna ayaa ka hor yimid aragtida ah in la xaddido qoondada dadka magan gelyo doonka ah ee Sweden iska dhiibi kara, sida ay qabto hoggaanka xisbigaasi Nyamko Sabuni oo qayb ahaan hindisahaa diiddey.
Ilaa 8 xisbi oo xubno ka ah Guddi hoosaadka Socdaalka ayaa haysta inay ilaa 7-aad ku gaaraan heshiis loo dhan yahay oo ku saabsan siyaasadda socdaalka.
Labada xisbi ee V iyo MP ayaa qaba in loo roonaado dadka magangelyo doonka ah, halka ay inta kale qabaan in aad loo adkeeyo hannaanka magangelyo doonka.
Tusaale xisbiga SD maba ogola in hal qofna lagu qaabilo Sweden, M iyo KD waxay qabaan in hoos loo dhigo oo lala ekeeyo midka dalalka deriska ah oo qiyaastii ah 7,000 oo qofood sanadkii, halka uu xisbiga S soo jeediyey hindise ah laba lab tiradaas oo ah 14,000 taasoo lagu saleeyey saamiga ay qaxootiga Sweden ka heleeyso marka magangelyo doonka loo qaybiyo dadyowga dalalka Midowga Yurub.
Previous articleFALANQAYN: Xuddunta xiisadda Itoobiya; Xamaasadda Oromada, Xasaradda Tigreega & Xukun doonka Amxaarada (Xaalku ma noqon karaa Yoguslavia cusub?)
Next articleRASMI: Duullimaadyadii gudaha Somalia oo dib loo bilaabayo